Mutemo wekuSora Nhare Wotanga Kushanda
Kutanga neChishanu, hurumende inenge yotenderwa zviri pamutemo kusora mashoko evanhu panhare, nharembozha kana painternet pasina kupihwa mvumo nematare sezvange zvichiitwa pasi pemutemo weinterception of communication act wa1987.
Kozvino pave kuda runyoro rwemunhu ane nyembe dzaAssistant Commissioner zvichienda mberi chete.
Mamwe magweta anoti uku kutyora bumbiro idzva remitemo yenyika. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti kutanga muna Chikumi hurumende yainge yatotanga kare kutora mapepa akadai kubva kumakambani embozhanhare asiri pasi pehurumende.
Nemusi wechishanu, hurumende yakaburitsa zvisungo izvi pasi pe Postal and Telecommunications Regulations ichiti makambani embozhanhare ose anosungirwa kupa mapurisa magwaro ose ane zvinenge zvichitaurwa nevanhu padzinhare kana painternet kana zvichidiwa.
Hurumende inoti inoda kushandisa zvinhu izvi kurwisa vanopfurikidza mwero kana mukudzidza-research.
Gurukota rezvehumhizha mukufambiswa kwemashoko, VaWebster Shamu, varamba kutaura ne Studio 7.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda sechipangamazano cheHuman Rights Watch, VaDewa Mavhinga vanoti zviri kuitwa nehurumende hazvisi pamutemo.